हामीले यो रिपोर्ट प्रथमत: भारतका प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्तुत गर्ने र त्यसपछि लगत्तै नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्तुत गर्ने तालिका तय गर्‍यौं । तर अहिलेसम्म भारतका प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्तुत गर्न सकेका छैनौं । प्रधानमन्त्रीले समय दिनु हुनेछ भन्ने आशामा नै छौं । समूहको यो रिपोर्ट भारत–नेपाल सम्बन्धलाई अझै सुचारु, सुदृढ एवं सुगठित बनाउनलाई लेखिएको हो । दुई देशका सरकारले नै नियुक्त गरेको समूहले रिपोर्ट बुझाउन नसक्दा मलाई आफैं पनि आश्चर्य लाग्छ । म आफू यति धेरै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समितिहरूमा सामेल हुने मौका पाएको छु, तर यस्तो स्थिति कहिल्यै देखेको थिइनँ । रिपोर्टमा लेखिएका सुझाव आदिलाई कार्यान्वयन गर्ने–नगर्ने सरकारको अधिकार र स्वतन्त्रता हो । यो समूहलाई केवल दिइएको जिम्मेवारीको पालना गर्नु छ । प्रकाशित : असार ४, २०७७ १०:४३
अर्का कूटनीतिक जानकार कुलचन्द्र गौतम ट्वीटरमा आक्रोशित देखिएका छन् । उनी भन्छन्—‘अरबसँग आउनेसँग पैसा लिने हो भने बुहानबाट आउनेसँग किन लिइएन ? अझ भारतबाट फर्किरहेका दिनदु:खी श्रमिकको स्थिति के छ ? बाहिरबाट आउने नेपालीको आर्थिक अवस्था हेरीकन हामीसँग दोहोरो मात्रै होइन, तेहोरो मापदण्ड देखिन्छ । समाजवादमुखी आर्थिक पद्धतीले के धनीलाई ‘फेबर गर्ने हुन्छ ?’
प्रकाशित : असार १, २०७७ २१:५६